CoPilot ဂျီပီအက်စ် - Navigation | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » CoPilot ဂျီပီအက်စ်အညွှန်း & ယာဉ်အသွားအလာ
CoPilot ဂျီပီအက်စ်အညွှန်း & ယာဉ်အသွားအလာ APK ကို
သငျသညျ, ယာဉ်မောင်းများအတွက်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ CoPilot သငျသညျဖုံးအုပျရတယ်ထားပြီး - သငျကားတစ်စီး၏ဘီးနောက်ကွယ်မှ, လမ်းသို့မဟုတ်တိုင်းပြည်ရှာဖွေစူးစမ်းကာ RVer ပေါ်တွင်သင်၏အချိန်ချည်ထားသောအမြတ်အစွန်းနှင့်အတူပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထရပ်ကားမောင်းသူရှိမရှိ။
တကမ္ဘာလုံး drivers တွေကိုသန်းပေါင်းများစွာတို့ကအသိမှတ်ပြုခြင်းနှင့်ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်ပေးပို့စင်းကိုအများအပြား, CoPilot GPS စနစ်သင်သည်လုံခြုံစွာလမ်းများ navigate ကူညီဖို့အားလုံးယာဉ်မောင်းနှင့်မော်တော်ယာဉ်အမျိုးအစားများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖြည့်ဆည်းဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ကိုတန်ဖိုးရှိရှိနဲ့ပျော်စရာပါစေကိုကူညီကြပါစို့။
14 ရက်ပေါင်းအခမဲ့အသံပဲ့ထိန်းအော့ဖ်လိုင်းအညွှန်း, လမ်းကြောင်းစီမံကိန်းနှင့်ယာဉ်အသွားအလာများပါဝင်သည်။ မည်သည့်ကတိကဝတ်မပါဘဲ app ကိုစမ်းကြည့်ပါနှင့်သင်ကမကြိုက်ဘူးလျှင်, သင်အချိန်မရွေးစာရင်းသွင်းနိုင်တယ်။
CAR Navigator & TRAFFIC
•3လမ်းကြောင်းမှတက်တဲ့ရွေးချယ်မှုနှင့်သင်၏အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းရှာပါ
•မော်တော်ကားတန်းအော့ဖ်လိုင်းမြေပုံများနှင့်အတူမိုဘိုင်း signal ကိုမပါဘဲစိတ်ချလက်ချမောင်း
• Pre-loaded နေရာများသန်းပေါင်းများစွာအားဖြင့်သင်တို့ကိုလှည့်ပတ်ရဲ့အဘယ်အရာကိုရှာဖွေမည်
• * ပိတ်ဆို့မှုကိုန်းကျင်ကို real-time အသွားအလာနဲ့ automatic လမ်းကြောင်းပြောင်းနေသည်နှင့်အတူနှောင့်နှေးရှောင်ကြဉ်ပါ
• ** ကမ္ဘာ၏မြေပုံနှင့်အတူမည်သည့်လမ်းအတွက်, ဘယ်နေရာမှာမဆို, မည်သည့်နေရာအရပ် Explore
ထရပ်ကား Navigator & TRAFFIC
• * PC နဲ့အနိမ့်တံတားများနှင့်ထရပ်ကား-ကန့်သတ်လမ်းများရှောင်ရှားခြင်းဖြင့်ဒုက္ခမှထွက် Keep MILER routing ကို
•အငှားအတွက်ယာဉ်မောင်း-ဖော်ရွေ Non-အာရုံပျက်လမ်းညွှန်မှု, ဒါကြောင့်သင်လမ်းမပေါ်တွင်အာရုံစူးစိုက်နိုင်ပါတယ်
•သင့်မော်တော်ယာဉ်နှင့်ဝန်များအတွက် optimized ဖြစ်ကြောင်းစီမံကိန်းခရီးစဉ်
•ဒဏ်ငွေရှောင်ရှားပိုက်ဆံ Save, Out-of-လမ်းကြောင်းမိုင်အကွာအဝေးနှင့်လောင်စာအသုံးပြုမှုကိုလျော့ချ
•အချိန်ပေါ်ကယ်ယူနဲ့ Real-time အသွားအလာနှင့်အတူတိကျသော ETAs ရ
RV Navigator & TRAFFIC
•သင့်မော်တော်ယာဉ်အရွယ်အစားအပေါ်အခြေခံပြီး RVs များအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲလမ်းကြောင်းများနှင့်လမ်းညွန်
•လမ်းသွားညွှန်ပြချက်မြှား & ထွက်ပေါက်နိမိတ်လက္ခဏာကိုသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူရှေ့ဆက်အချိန်သင့်ရဲ့အလှည့်ကိုသိပါ
အသေးစိတ်မြေပုံကိုလွှမ်းခြုံများအတွက် copilotgps.com/map-coverage ထုတ်စစ်ဆေး
facebook.com/copilotgps | တွစ်တာ: @copilotgps
သင့်ရဲ့ RV အညွှန်းများအတွက်အများဆုံးအတိုင်းအတာအကြောင်းပိုမိုထွက်ရှာ, ငါတို့ထောက်ခံမှုစင်တာ support.copilotgps.com (အမြင့် 14ft, အကျယ် 102in, စုစုပေါင်းအရှည် 45ft, အလေးချိန် 26,000lbs) သွားရောက်ကြည့်ရှု။
နောက်ခံအပြေး GPS စနစ်၏ဆက်လက်အသုံးပြုမှုကိုသိသိသာသာဘက်ထရီသက်တမ်းကိုလျော့ချနိုင်ပါတယ်
ဒီ app update ကိုတိုးတက်မှု, ဘာဂ်နှင့်အထွေထွေစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်တည်ငြိမ်ရေးတိုးတက်မှုနှင့်ပြည့်ဝ၏။ CoPilot အသုံးပြု Thank you!
မေးခွန်းများကိုရှိပါသလား? ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထောက်ခံမှုစင်တာအတွက်အဖြေကို support.copilotgps.com Find
CoPilot ဂျီပီအက်စ်အညွှန်း & ယာဉ်အသွားအလာ
48.23 ကို MB